Kedu ihe bụ yoga nwa ma ọ bụ yoga maka ụmụntakịrị?
Nsonye n'ime ihe a na-eme kwa ụbọchị nke nwa ahụ a họpụtara ahọpụtara yoga karịsịa maka nwata ga-enyere aka ịhazigharị akụkụ ahụ ụmụaka na ụzọ nke mmepe mmekọrịta. Atụla egwu na mmega yoga na-esiri ụmụaka ike, ọbụnadị na nsụgharị nwere ike imebi nsogbu. Ọ dịghị nwatakịrị ga-agafe ókè nke ike ya, ebe ọ bụ na ụmụaka ndị na-eto eto na-aghọta ihe ha nwere ike ime. Nwa ya ga-enwe ike ịnagide mmega yoga, ma ọ bụ na ọkwa eleghi anya ga-ajụ ịrụ ya.
Ọ bara uru ime yoga nke cholagogy?
Tupu gị na nwa gị amalite na-eme yoga, ngwa ngwa ị ga-enwe ike inwe mmetụta dị mma. Ihe ga-esi na ya pụta agaghị adị ogologo oge: mgbe izu izu ole na ole gasịrị, ị na nwa gị ga-enwe mmetụta nke ume, ume ọhụrụ na ume. Nwatakịrị ga enwe ekele maka nke a, ị ga-ahụkwa otú o si eji mpako na-aga n'ihu. N'okwu a, echefula ịgafe ihe omume nke ndị okenye.
Yoga ụmụaka bụ usoro mmemme pụrụ iche, nke a na-emegharị nke ọma na ịkụzi onwe ya na ihe ntụrụndụ. Egwuregwu, ọgwụ dị mgbagwoju anya na ihe dị egwu na-agba ume bụ ọkwa kasị elu nke yoga gymnastic. Ụmụ amụrụ ọhụrụ na-atụ aro nhọrọ ịkwadebe, nke na-adịghị mkpa ka ọ bụrụ mmalite nke njem ogologo iji zuo okè nke yoga. Ebumnuche nke mgbagwoju anya nke gymnastics ụmụaka bụ ime ka ahụ dị ike ma nyere aka na gburugburu ya, iji gbochie mmepe nke ọrịa ndị na-arịa ọrịa site na ịba ụba nke ọrịa.
Ndabere nke ozizi yoga bụ ihe ọmụma na usoro nke ọgwụgwọ na ịdị ọcha nke akụkụ ahụ, gbanyesiri mkpọrọgwụ na ọdịnala India oge ochie. Yogis kwusara onyinyo nke ndụ, dị ka nso nke okike dị ka o kwere mee.
Usoro ihe omimi nke yogis bu ihe siri ike na otutu. E kewara ya n'ọtụtụ ozizi. Ndị a ma ama bụ hatha yoga, raja yoga, jnani yoga na karma yoga. Ozizi a nile dị n'otu: ụkpụrụ ahụ ga - ejide onwe ya.
Yoga, nke a na-eme kemgbe ọ bụ nwata (nwa-yoga), na-etinye ntọala n'ime onye na-ejere ya ozi dị ka nkwado siri ike ime mmụọ na nke anụ ahụ. Ịgba egwu egwuregwu na enyemaka nke mgbagwoju anya yoga dị iche iche bụ ụzọ dị mma isi nyere nwatakịrị aka ime mgbanwe n'ọnọdụ ọnọdụ nke oge a. Nchikota aka, strok, ntụrụndụ na ụfọdụ omume pụrụ iche na-akwalite mmepe niile.
Ime yoga na ntụrụndụ, ị ga-ahụ na nwatakịrị ahụ na-eche ma gosipụta ọnọdụ gị, ya mere gbalịa izere ọdịdị ọjọọ nwa ahụ. Nke a bụ ụkpụrụ nke onwe onye na njide onwe onye. Idozi nyocha na nghọta miri emi nke mmetụta uche dị n'ime gị na-adọta gị, ị gaghị ekwe ka nwatakịrị ahụ nwee mgbagwoju anya na mmetụta gị na echiche efu. Nwa ọhụrụ na-emeghachi omume n'egosipụta ezi mmetụta, na-agwa ha okwu n'ezoghị ọnụ (site na anya, aka na okwu).
Na yoga, nsogbu ọ bụla dị mma site na ntụrụndụ - a na-eji nwa ngwa ngwa mee ihe n'eziokwu bụ na esemokwu na ntụrụndụ na-akwado ibe ha.
Ọ dị ezigbo mkpa mgbe ọ dị obere iji kụziere nwatakịrị ka ọ na-eme ka ọ dị jụụ iji nweta ntụrụndụ dị iche iche, ya bụ, iji zuru ike ma nwee ntụrụndụ. Tupu nwa ọhụrụ ahụ amụta ime nke a, na mbụ ọ ga-enwe ike ịchịkwa mmeghachi omume ya na nhụjuanya na nrụgide anụ ahụ, ịnagide ihe mgbu, nrụgide na anụ ahụ obi erughị ala.
Mkpakọrịta chiri anya na nwatakịrị ahụ site na yoga site na ịmetụ aka, igwu egwu na nkwonkwo izu ike na-egosi na ị na-emeziwanye ma na-eto eto, nke a bụ usoro na-akpali akpali. Maka oge mbụ maka ọnwa anọ, nwa amụrụ ọhụrụ kwesịrị ịmalite ibi ndụ zuru oke, ọ bụghị naanị ịkwadebe maka ọdịnihu. Nke a bụ oge dị oké mkpa, ebe ọ bụ na n'oge a, a na-etinye ntọala nke ọrụ neuropsychic nke mmadụ.
Yoga na ịhịa aka n'ahụ
Ihe mgbagwoju nke yoga ụmụaka bụ ihe amamihe dị na ya site n'iji nlezianya a haziri ahazi. Ihe niile na-amalite site na ọchịchọ uche nke nne ozugbo a mụsịrị ya iji mee nwa ahụ n'afọ ya ma chee ahụ ya, dịka ma ọ bụrụ na ị hụ na "ihe niile dị mma, ihe niile dịla" na nwa ya dị mma. N'ọtụtụ ebe ọdịda anyanwụ nke Oriental, ịhịa aka n'ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke nlekọta ụmụaka.
Malite ihe ọmụmụ yoga ọ bụla na ịhịa aka n'ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ dị ogologo ma na-agwụ ike maka nwatakịrị ime ha abụọ, malite ozugbo na yoga. Mgbe ahụ, ihe niile yoga gụnyere ịhịa aka n'ahụ "akpọrọ", ya bụ, nke ị na-adịghị mkpa iji kpuchie nwa ahụ ma jiri mmanụ ahụ mee ihe. N'oge nkuzi ọ bụla, a ga-etinye aka, ụkwụ na afọ nwa nke aka.
Mmetụta dị mma nke mmetụta nke yoga na ahụ nwa
Maka otu ọrụ zuru oke, nwatakịrị na-enweta ụdị ọgwụgwọ ahụ, dị ka ụbọchị dum; ọ na-enye aka n'ịgwọta ahụ na nke miri emi, ụra siri ike.
Omume nwatakịrị ahụ na-aghọkwu nke ọma.
Ghọta akụkụ na usoro niile, gụnyere ụjọ.
Yoga ga-enyere gị na nwa gị aka ịmatakwu enyi ma mee ka nkwurịta okwu dị n'etiti gị.
Yoga na-enyere aka n'ịgwọ ọrịa mberede, na-eme ka ikike nwa ahụ nwee ike ịnagide nsogbu ndị na-akụda mmụọ.
Inwe mmetụta siri ike na obi ụtọ na nchekasị dị mma n'ọdịnihu ga-enyere ya aka ịnagide nsogbu ná ndụ.
N'inwe ahụmahụ nke nkwurịta okwu na ndị nne na nna, nke e nwetara site na-eme yoga, nwa ahụ ga-adị njikere maka mmekọrịta mmekọrịta ya na ime ngwa ngwa na ọha mmadụ.
Mkpakọrịta zuru ezu na nwa ahụ na-enyere ndị nne na nna aka ịnagide nrụgide ndị metụtara ọmụmụ nwa.
Ọtụtụ n'ime akwụkwọ ndị ahụ gbasara yoga ụmụaka bụ maka ịmekọrịta njikọ dị n'etiti nne, mana maka ndị nna, mmekọrịta chiri anya na nwa ahụ dị oke mkpa. Ma ịhịa aka n'ahụ na yoga bụ ụzọ dị mma maka ụmụ nwoke iji mee ka ha na ụmụ ha nwee mmekọrịta dị mma, na-ekere òkè na mmepe ya.
Nzọụkwụ mbụ iji yoga
Nzọụkwụ mbụ iji yoga bụ ịhụ nwa ahụ ma gee ya ntị, ebe ị maara mmetụta na mmeghachi omume gị na ihe na-eme. Ihe omuma abuo abuo, ichota ihe omuma na ihe omuma nke yoga oge gboo, ga enyere anyi aka imata ihe omuma iji malite nwa akwukwo na nwatakiri.
Uzo ugwu - tadasana
Na yoga oge ochie maka ndị okenye, tadasana - nsị nke ugwu ahụ, na-amalite ma mechie nkwụsị dịgide nke nkuzi ọ bụla. Ime ya ga-enyere gị aka itinye uche gị ka gị na nwa gị. Ịnọ n'ebe ọ bụla, n'oge oge nke oge, ị nwere ike ịmalite ime ya. Kwụsie ike, kpoo ume ma gbarie ma lekwasị anya na mmetụta uche dị n'ime.
Guzogide mgbidi ahụ, na-ebugharị ụkwụ gị ọnụ ma ọ bụ dịtụ iche, ma na-eche na ị nọ n'ala. Ọ bụrụ na nke a na-enyere aka, buruo ikpere gị abụọ ozugbo ma mee ka ọkpụkpụ ahụ gbanwee. Kpoo ubu gi, olu, ogwe aka ma lee anya n'ihu. Jide ebe a na-ahụ anya.
Na-echebara mmetụta gị echiche na n'echiche ị na-emikpu onwe gị n'oge ugbu a, na-etinye ahụ gị na mbara igwe n'etiti ụgbọelu. Jiri uche gị chee na nkwado dị n'okpuru ụkwụ gị na ebe dị anya dị n'ihu.
Mgbe nwatakịrị ahụ na-eti mkpu, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ jupụtara, ma ị gaghị emesi ya obi ike, gbalịa mee ihe ndị a.
Nke mbụ, lekwasị anya na iku ume gị. Ọ bụrụ na ị dị oke ụfụ, ọ ga-abụ na ọ ga-emetụ ọkụ. Ugboro abuo ma o bu okpukpu ato ka o kwere mee iku ume miri emi, na-ekwu okwu "ha".
Ugbu a, na-agbanye ume na ume nke abdominal na akwara obi. Iji mee nke a, tinye aka gị na afọ gị ma lelee maka mmebe iji bulie ya ma hapụ ya. Ma mgbe ị na-ekpuchi, akwara nke abdominal pịa na-ebili naanị mgbe ahụ - nkwụsị ahụ. Site na iku ume a, a na-ejikarị oxygen jupụta ahụ ahụ, nke na-adịghị eme ememe "elu" na "ọkara" nke na-eku ume (mgbe ọ bụ nanị ụbara dị na ya).
Mgbe a na-emegharị ahụ ọkụ ole na ole, laghachi na nwa gị, onye ị ga-emesi obi ike. Ugbu a, o yikarịrị ka ọ ga-adịrị gị mfe karị ịghọta ihe ọ chọrọ.
Ebee ka ọ ga-aga ma ọ bụrụ na ị ga-ehicha nwa
Kedu otu esi eme ka mgbochi nwatakịrị ahụ gbakee?
Usoro maka nchọpụta n'oge nke dyslexia
Ọ dị m mkpa ime mgbochi igbochi ụmụaka?
Otu esi emeso ibu oke n'ime umuaka
A obere nwatakịrị na kọntaktị kọntaktị
Ịgba egwú na TNT, agha nke oge: onye ga-emeri na njedebe a maraworị
Biography na ọrụ nke Leonid Utyosov
Ihe ọṅụṅụ na-agba chaa chaa na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi
Onyinye dị oke mkpa maka ụmụ nwoke
G in i ma ob ur u na m amagh i ot 'ue si agwa nd i enyi okwu okwu, ihere na-eme ihere?
Ihe nzuzo nke ịhụ ụmụ nwoke n'anya, ma ọ bụ Otu esi aghọta na ọ nwere mmasị n'ebe ị nọ
Otu esi ahọrọ akwa nri
Ọ bara uru iso di na-aṅụ mmanya na-aṅụ mmanya?
Ihe odide mara mma na ola diamond na ụkwụ
Bochhenoy Rynsky ga-ekpe ikpe site n'aka ndị isi ụlọ ọrụ ahụ
A na-emegharị ntụrụndụ site na ime achịcha imeju
Ịmụta ịmata ọdịiche dị na nke ọma ịhọrọ ísì ụtọ
Nri Mkpụrụ Snake
Ekere ya na di ya: otu esi agba ndu ịgba alụkwaghịm
Ebe kachasị ama n'ụwa
Na-acha ọcha jaket